Iziko Loncedo | Zeevou
UZeevou Yazi ngumba ophambili kuwo onke amanqaku oncedo, iividiyo zoqeqesho kunye nee-FAQ eziza kukunceda wenze uninzi lweempawu zethu. Nokuba uyaqala kwaye ufuna ukulandela inyathelo lethu ngamanyathelo okuseta isikhokelo okanye ungumntu oligqala ofuna ukufumana okungakumbi malunga nenqaku elitsha, nantsi indawo onokuthi uqale ngayo ukukhangela.
Silapha ukuxhasa onke amanyathelo endlela.
Isikhokelo samanyathelo ngamanqanaba sokumisa kunye nesishwankathelo esineenkcukacha zokusebenzisa iindawo ezahlukeneyo zenkqubo.
Funda iimpendulo zeyona mibuzo yethu ibuzwa Rhoqo, okanye ubuze owakho umbuzo.
Kubafundi ababonayo sibeka ndawonye ubutyebi bevidiyo zoqeqesho.
Yiba yinxalenye esebenzayo yoSapho lakwaZeevou ngokujoyina uluntu lwethu lwehlabathi kwi-intanethi. Xhasa ukufundwa kwakho, inethiwekhi, okanye ubuze amaqabane asebenza nawo ukuze axhase.
Joyina iqela lethu le-WhatsApp
Fumana izibhengezo zexesha lokwenyani kwiQela lethu.
Yithi Hi kuFacebook
Nika ingxelo eqhubekayo ngekamva leZeevou.
Qhagamshela kwisiteshi nge-iCal Link
Inkqubo yokugcina iselfowuni
Shumeka iZeevou iFrame kwiwebhusayithi yakho ye-HTML
Izicwangciso zamaxabiso ebusuku / ngeveki / ngeNyanga
Qhagamshela kwiKhayaAway / Vrbo
Ngaba Ufuna Inkxaso Eyongezelelweyo?
Umphathi weMpumelelo yeQabane
Ukuba unguMxhasi, uya kunikwa uMphathi weMpumelelo kwiQabane xa usayina. Umphathi wakho weMpumelelo yeQabane uya kuhlala ekufutshane nge-imeyile okanye nge-WhatsApp, ke zive ukhululekile ukufikelela kubo.
Abaxhasi kunye nabaVangeli ngokufanayo, abaPhathi bethu boThethathethwano lwamaQabane abancedisayo bafumaneka ngeenxa zonke kwiNgxoxo ebukhoma. Ukuba khange ukwazi ukufumana impendulo kwimibuzo yakho usebenzisa izixhobo zethu ezilapha ngasentla, zive ukhululekile ukusishiya umgca.